Amadoda angabathandi abafazi, impumelelo emva kokufa kukaLarsson | Uncwadi lwangoku
Amadoda angabathandi abafazi yinoveli yolwaphulo-mthetho ebhalwe nguStieg Larsson. Yapapashwa ngo-2005, unyaka emva kokubhubha kombhali, kwaye iyincwadi yokuqala kuthotho Iwaka leminyaka. Ukuqaliswa kwayo kube yimpumelelo, njengoko ithengise izigidi zeekopi ngexesha elifutshane.
Ibali lazisa UMikael Blomkvist (intatheli) y a U-Lisbet Salander (umgwebi), ngubani uza kudibana ukusombulula ityala elibandakanya usapho olubalulekileyo lwaseSweden. Le adventure yokuqala yahlengahlengiswa kwi-cinema kabini; eyokuqala, ngo-2009 ngenkampani yemveliso eSweden. Emva koko, ngo-2011, inguqulelo yaseMelika yakhululwa, apho umlingisi uDaniel Craig kunye nomlingisi uRooney Mara babumba isibini esikhokelayo.
1 Amadoda angabathandi abafazi
1.1.3 Isibini esineenkwenkwezi
2.1 Umsebenzi ugqityiwe
2.3 Ukupapashwa emva kokufa
Amadoda angabathandi abafazi Yiyo inoveli emnyama iqala i-trilogy Millennium. Ibali kwenzeka eSweden ngo-2002, kwaye umxholo wayo ujikeleze ukunyamalala kuka-Harriet Vanger oneminyaka eli-16 ubudala, okwenzeka phantse kumashumi amane eminyaka eyadlulayo. Ukufumanisa ukuba kwenzeka ntoni kulowo wayekwishumi elivisayo, uVanger waqhagamshelana nomphenyi kunye nomkhangeli wekhompyuter uLisbet Salander kunye nentatheli uMikael Blomkvist.
Amadoda angathandanga ...
UMikael Blomkvist yintatheli kunye nomhleli wephephancwadi lezopolitiko laseSweden Millennium. Iyelenqe limbeka kwixesha elibi emva kokuphulukana nesityholo sokungcoliswa ngokuchasene nosomashishini uHans-Erik Wennerström. U-Blomkvist wabonisa ukuba usomashishini ukhohlakele, nangona kunjalo, inkundla yafumanisa ukuba ubungqina abuqinisekanga kwaye yanyanzela intatheli ukuba ihlale iinyanga ezintathu ejele kwaye ihlawule isohlwayo esinexabiso.
Emva kwexesha, uHenrik Vanger Umlawuli wangaphambili weVanger Corporation Nxibelelana noLisbet Salander ukuphanda iBlomkvist. Emva kokuba ingxelo ihanjisiwe, iVanger Uthatha isigqibo sokuqesha intatheli ukuba iphande malunga ukunyamalala komtshana wakhe uHarriet, Kwenzeka kwiminyaka engama-36 eyadlulayo. Ukutshintshiselana, unikezela ubungqina obomeleleyo ngokuchasene neWennerström; Uqinisekile ngomvuzo, uBlomkvist wamkela.
Intatheli iya kwisiqithi saseHedeby, indawo ehlala iVanger nalapho kwenzeka khona ukunyamalala kukaHaret. Apho uya kudibana noMartin “Mzalwana wentombazana elahlekileyo— kunye namanye amalungu osapho, kunye nabanye abahlobo benkampani.
Embindini wophando, UBlomkvist uya kuba nenkxaso yeSalander, Ngubani oza kukunceda ubeke iziqwenga zepuzzle uze ufike kwisiphumo esimangalisayo.
Ngonyaka 1966 iVanger yayihlanganisiwe kwifama yosapho ebekwe kwiSiqithi saseHedeby. Yayiyintoni umzuzu oqhelekileyo wokuvisisana kunye nokuphumla ngequbuliso kwajika kwaba yinto ecaphukisayo emva kwe Ukunyamalala kukaHarriet.
Iimeko zazingaqhelekanga kakhulu, amaqela amapolisa akhangela ngaphandle kokudinwa engakhange afumane naluphi na umkhondo. Ixesha elidlulele, ityala lavalwa, abukho ubungqina ukuqinisekisa ukufa kwakhe, ukuqweqwedisa okanye ukubaleka okungalindelekanga.
Ukufika kwesi siqithi, UMikael Blomkvist wenza udliwanondlebe nezihlobo ezininzi zikaHarriet, kubandakanya umama wakhe kunye nomntakwabo-ngubani umphathi omtsha wenkampani. Kuphando lwakho fumana imikhondo ebingaziwa: Mbini Iifoto lowasetyhini osemtsha kwisikolo samabanga aphakamileyo y idayari yakhe. Le yokugqibela inamagama kunye namanani amahlanu, ayimfihlakalo.
UPernilla (intombi kaBlomkvist) udlula esiqithini kwaye unceda ukusombulula le mfihlakalo. Ukufumanisa kukhokelela kwintatheli ekubulaweni kukanobhala yenkampani iVanger, eyenzeka ngo-1949. UBlomkvist waqhagamshelana noHenrik, wamazisa ngale meko kwaye wacela inkxaso yakhe. ngubani ocinga ukuba ungumbulali obulalayo. Ngokukhawuleza, usomashishini uthatha isigqibo sokuthumela uLisbet Salander ukuba enze kabini noMikael kwaye ke alikhawulezise ityala.
Nje ukuba uLisbet ajoyine uphando lukaBlomkvist, bagqiba ukusombulula Imfihlelo yangena kwidayari kaHarriet. Olo lwazi wabakhokelela ekufumaneni iimeko zamabhinqa amaninzi alahlekileyo; amanani abonisa iivesi zebhayibhile apho kuchazwe khona isohlwayo esomeleleyo esivela kuThixo. Oku kungqina umbono wentatheli: ngumbulali obulalayo.
Kamva bafumanisa imeko embi: Martin —UmntakwaboHarriet— linoxanduva lokudlwengula nokubulala abafazi abaninzi. Xa ejongene naye, uyangqina olu lwaphulo-mthetho luqatha kwaye avume ukuba ufunde yonke into kuyise, u-Godofredo Vanger. Ngaphandle kokubhengeza zonke ezo zenzo zingenabuntu, uMartin uthi akazi kwanto eyenzekileyo kudade wabo.
UGeoffrey Vanger Intloko-yosapho- yaba ngu- Umbhali wezinto zamatyala apho i Iqhina kwidayari; Ukongeza, olunye ulwaphulo-mthetho olothusayo luyatyhilwa: wabaphatha gadalala ngokwesondo abantwana bakhe ababini amaxesha ngamaxesha.
UMartin, emva kokufunyanwa, kwikona uLisbet noMikael ukuze bababulale, kodwa bona bayaphumelela ukubaleka. Ukusuka apho baqala ukudibanisa amachaphaza kunye nokufumanisa okungakholelekiyo okuvumela ukuba ityala lisombululwe, kufunyanwa ukuba uphi uHarriet.
UKarl Stig-Erland Larsson ibiyi Umbhali waseSweden kunye nentatheli Wazalwa ngo-Agasti 15 ukusukela ngo-1954 kwidolophu yase Skelleftea. Abazali bakhe - uVivianne Boström no-Erland Larsson - babebancinci kakhulu kwaye bengenazixhobo ngokwaneleyo xa babemkhulelwa; ngenxa yale nto, UStieg wakhuliswa ngumakhulu notatomkhulu wakhe kweli lizwe.
Xa wayeneminyaka eli-9 ubudala, utatomkhulu wakhe wasweleka, emqhubela ekubeni abuyele eUmea nabazali bakhe. Kwiminyaka emithathu kamva, ifumana umatshini wokubhala kwaye ibhale rhoqo ebusuku, ukusukela ebusaneni waphathwa kukungalali. Izalamane zakhe zachaphazeleka yingxolo yeso sixhobo kwaye zamthumela kwigumbi elingaphantsi; Le meko ingonwabisiyo yenza ukuba uStieg athathe isigqibo sokuzimela.
Ngaphandle kokungabinaso isidanga saseyunivesithi, UStieg usebenze iminyaka engama-22 ilandelelana njengomyili wemizobo kwiindaba ezihambelana neTidningarnas Telegrambyrå (TT). Kwakhona Wayelitshantliziyo lezopolitiko kwaye wakhokela uqhanqalazo oluninzi ngokuchasene neMfazwe yaseVietnam, ubuhlanga kunye nelungelo eligqithisileyo. Ndiyabulela kule nto, wadibana noEva Gabrielsson, owayengumlingane wakhe ngaphezu kweminyaka engama-30.
Kwi 1995, wayeyinxalenye yabenzi be Isiseko se-Expo, Yasekwa ukuze iphande kwaye ibhale phantsi izenzo zocalucalulo kunye nezikhokelo ezichasene nedemokhrasi yoluntu. Kwiminyaka emine kamva walathisa eli phephancwadi ExpoApho, wayesebenza nzima njengentatheli. Ngaphandle komzabalazo wokugcina eli phephancwadi lisebenza, ekugqibeleni lavalwa kuba lingakhange lifumane inkxaso eyimfuneko.
Uvelise iincwadi ezininzi ezisekwe kwimibuzo yeendaba kubukho bamaNazi kwilizwe laseSweden kunye nokunxibelelana norhulumente wangoku. Ngenxa yoku kunye nokusebenza kwabo kuqhankqalazo, wayesongelwa ngokufa izihlandlo ezininzi. Esi yayisesinye sezizathu eziphambili zokuba wayekuphepha ukutshata no-Eva, ukukhusela ingqibelelo yakhe.
UStieg Larsson wasweleka eStockholm nge-9 kaNovemba ka-2004 yesifo sentliziyo. Kucingelwa ukuba oku bekukhuthazwa yinto yokuba umbhali waseSweden wayetshaya ngetyathanga, isikhova sasebusuku kunye nomthandi wokutya okungenamsoco.
Ukupapashwa emva kokufa
Kwiintsuku ngaphambi kokufa kwakhe okungalindelekanga, umbhali wayegqibile isahlulo sesithathu se-trilogy Millennium. Ngelo xesha umhleli wakhe wayesebenza kwivolumu yokuqala ebizwa Amadoda angabathandi abafazi. Le ncwadi yapapashwa unyaka emva kokubhubha kwakhe kwaye yaba yimpumelelo enkulu. Umshicileli uqinisekisa ukuba le saga ithengise ngaphezulu kwe-75 yezigidi zeekopi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » Amadoda angabathandi abafazi
Intliziyo endihlala nayo